KIA ဘက်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် အစိုးရ တပ်သားများ ကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီ | ဧရာဝတီ
KIA ဘက်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် အစိုးရ တပ်သားများ ကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီ
လဖိုင်| January 16, 2013 | Hits:6,790
9 | | ပထမအကြိမ် လွှတ်ပေးခဲ့သည့် အစိုးရတပ်သား ၆ ဦးကို တွေ့ရစဉ်
ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) ဘက်သို့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်ရှိနေသည့် အစိုးရ တပ်မတော် သားများနှင့် ကလေးစစ်သားများကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နေရပ်ရင်းသို့ပြန်နိုင်ရန် အတွက် စရိတ်ပေးကာ ပြန်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နေရပ် ပြန်စေခဲ့ သူများထဲတွင် အသက်ပြည့် အစိုးရ တပ်မတော်သားနှင့် ရဲတပ်သား ၁၅ ဦး၊ ကလေးစစ်သား ၈ ဦးတို့ ပါဝင်သည်။
ကလေးစစ်သားများ အတွက်မူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) က တပ်ထွက်ခွင့် လက်မှတ်ရသည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးကာ မိဘများ လက်သို့ အပ်နှံ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကလေး စစ်သားများကို မူဆယ်မြို့တွင် ILO ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦးက လာရောက် ခေါ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
“ဒီဘက်ကပြောတော့ သုံ့ပန်းတဲ့၊ ဟိုဘက်က ပြန်ပြောတော့ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက် တပ်ပြေးတွေတဲ့၊ ပြန်ရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ မစဉ်းစားရဲသေးဘူး” ဟု ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ရိက္ခာပြတ်သဖြင့် ရွာထဲ ရိက္ခာဆင်းဝယ်ရာမှ KIA တပ်သားများ၏ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရပြီးနောက် ယခု KIA က ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်သည့် ရဲတပ်သား တဦးက ပြောသည်။
KIA က မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ တရားဝင် လွှဲပြောင်းပေးရန် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ တဆင့် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း အစိုးရက တပ်မတော်သားများ မဟုတ်၊ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက် ထွက်ပြေးသူများ ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်ဟု KIA မဟာဗျူဟာ သုတေသနဌာနကြီးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဦးဇော်တောင်က ပြောသည်။
“သူတို့ကို လွှဲအပ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားတယ်၊ ကိုမြအေးတို့က တဆင့်လည်း ပြောတယ်။ လက်ရှိအစိုးရက သူတို့ကို လက်ခံဖို့ ပြောမလာဘူး၊ လက်ခံနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ မရှိဘူးလို့ ကိုမြအေးတို့ဆီက တဆင့် ပြန်ကြားတယ်။ သူတို့ဟာ တပ်မတော် သားတွေ မဟုတ်ဘူး၊ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်၊ တပ်ထွက်ပြေးသူတွေ ဆိုပြီး ငြင်းပယ်တဲ့ သဘောရှိတယ်” ဟု ဦးဇော်တောင်က အစိုးရ တပ်မတော်သားများကို တရားဝင်လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုနိုင်သည့် အကြောင်းကို ရှင်းပြစဉ် ပြောခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ဇွန်လ အတွင်းကလည်း ခလရ ၃၇ မှ အရာရှိ ၃ ဦး အပါအ၀င် တခြားအဆင့် တပ်မတော်သားများနှင့် စုစုပေါင်း ၆ ဦးကို ကချင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းအောင်နှင့်အဖွဲ့ ကချင်ပြည်နယ် လဂျားယန်ဒေသကို လာရောက်စဉ်က လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် KIA ဘက်က ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းအောင်က ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က လဂျားယန်ရှိ စရဖ တပ်ဆွယ်မှ တပ်ဆွယ်မှူးများကလည်း ညွှန်ကြားချက် မရှိဟုဆိုကာ လက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း ထို တပ်မတော်သား ၆ ဦးကို ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းအောင် ဒုတိယအကြိမ် လဂျားယန်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာသည့်အခါတွင် ယင်း၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိကို လက်မှတ်ထိုး လက်ခံစေကာ ပြန်လည်လွှဲအပ် ပေးခဲ့သည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) က အစိုးရ တပ်မတော်သားများကို တရုတ် – မြန်မာ နယ်စပ် ဂျယ်ဂေါင်အထိ ပို့ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းတပ်မတော်သားများ မြန်မာပြည်ဘက်သို့ ပြန်ချင်သည်ဆိုပါက ပြန်နိုင်သကဲ့သို့ တရုတ်ပြည်တွင် လုပ်ကိုင် စားသောက် မည်ဆိုလျှင်လည်း ၎င်းတို၏ သဘော သဘောဆန္ဒအတိုင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ ကျနော်က ဟင်္သာတကပါ။ တပ်ထဲကိုပဲပြန်ပါမယ်။ ကျနော်တို့က ထွက်ပြေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ထောင်ကျမယ်ဆိုလဲ ခံရမှာ ပေါ့” ဟု KIA ၏ ပြန်ပို့ခြင်း ခံခဲ့ရသည့် တပ်ကြပ်ကြီး တဦးက ပြောသည်။
၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က လဂျားယန်တိုက်ပွဲတွင် ဒဏ်ရာများနှင့် ကျန်ခဲ့သည့် ခမရ ၃၈၃ မှ ဒုတပ်ကြပ် တဦးကလည်း ၎င်းအနေဖြင့် မည်သည့်ဒေသသို့ ပြန်ရမည်ကို မသိသေးကြောင်း၊ ၎င်းသည် ဒဏ်ရာရစဉ် KIA ၏ အဖမ်း ခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
“ကျနော်တို့ စစ်ကြောင်းမှူး ကျော်ကျော်ဝင်းက လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ သူတွေကို သတ်ခဲ့လို့ ပြောတယ်။ ဒဏ်ရာနဲ့ ကျန်ခဲ့တုန်း အဖမ်းခံရတာ” ဟု သူက ပြောသည်။
ဦးဇော်တောင်က အစိုးရ တပ်မတော်သားများကို ပြန်လည် လွှတ်ပေးစဉ် “ခင်ဗျားတို့ ကနိုင်ငံကြီးတခုရဲ့ တပ်မတော်က တပ်မတော်သားတွေပဲ၊ ဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံခြားမှာ ပြောခဲ့သလို စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ တပ်မတော်က တပ်မတော်သားတွေပဲ၊ အခု သူများလက်ထဲရောက်လို့ ပြန်ပို့တာကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသဘောလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ” ဟု ဆိုသည်။
KIA တပ်မတော်သို့ ပူးပေါင်း ၀င်ရောက်လာသော မြန်မာ့ တပ်မတော်သားများ အားလုံးကို နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် လက်ခံသွားမည်ဟု KIO က ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အချက် ၅ ချက်ပါ မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသို့ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်စဉ် ရေးသားထားသည်။
ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို UN ကူညီရန် အစိုးရခွင့်မပြု
8 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website mr TM January 16, 2013 - 7:53 pm	မြန်မာ့တပ်မတော်သားတို့ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြပါတော့စစ်သုံ့ပန်းဖြစ်လို့တော့တပ်မတော် ကပြန်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတပ်ပြေးအဖြစ်နဲ့ထောင်ကျအုံးမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ထောင်အကြောင်း တော့သိမှာပါခဲရေတိုက်ခဲရေခြိုးပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်တောင်ကြာကြာမခံပါဘူး၊နယ်စပ်မှာဘဲ နေပြီးလုပ်ကိုင်စားနေရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိမှာပါ၊ကချင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါပြန်လွှတ်ပေလို့ မြန်မာတပ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့တောင်မရပါဘူး။
Reply	Tide January 17, 2013 - 1:40 pm	You’re right. These soldiers will be executed as soon as they get back to their barracks. They would not join the Burmese Hitler’s army in the first place. People with the right mind must never join this brutal regime. It shows us that there are many stupid people in Burma.
Reply	Chinlay January 16, 2013 - 8:41 pm	I have never seen and heard the Burmese army doing like this.
Reply	ဗမာ January 17, 2013 - 11:01 am	မြန်မာစစ်တပ်မှအောက်ခြေတပ်သားများနားလည်ဖို့သင့်ပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့အခုလိုအသက်ပေးပြီးလုပ်နေတာ ဘယ်သူတွေကောင်းစားဖို့လဲဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဦးနှောက်နဲ့လူသားတွေ စက်ရုပ်တွေမဟုတ်ကြဘူး။ ခင်ဗျားတို့ကိုပေးကြွေးနေတာ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ငွေတွေမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူ့ငွေတွေသာဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် KIA ကိုကျေးဇူးတောင်တင်ရမှာပါ။
Reply	ဖိုးလုံး January 17, 2013 - 11:12 am	“ကျနော်တို့ စစ်ကြောင်းမှူး ကျော်ကျော်ဝင်းက လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ သူတွေကို သတ်ခဲ့လို့ ပြောတယ်။ ဒဏ်ရာနဲ့ ကျန်ခဲ့တုန်း အဖမ်းခံရတာ” ဟု သူက ပြောသည်။”
အဲဒီစစ်ကြောင်းမှုးဆိုသူကိုယ်တိုင်ဒဏ်ရာရပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒါဆိုရင် သူဘယ်လိုများအမိန့်ပေးမလဲ သိချင်လို့ပါ။ အခုလို ကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိလို့လည်းပဲ မြန်မာစစ်တပ်မှာ ဒီလိုနေရာရလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အံ့မခန်း မြန်မာ့မတပ်မတော်။
Reply	တောင်ပေါ်သား January 17, 2013 - 4:40 pm	ကိုယ့်အတွက်အသက်စွန့်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြတဲ့ တပ်မတော်သားများရဲ့ အသက်နှင့်ဘဝကိုတောင်ပြန်လည်းငဲ့ကြည့်ပပေးတဲ့ ဗမာ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ကတော့ ကမ္ဘာမှာရှာမှရှားတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ဓါတ်ပါပဲ။ မွတ်စလင်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမား တွေတောင်သူတို့လောက်မရိုင်းဘူး။ အင်း . . . ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတောင်စိတ်လိုက်မာန်ပါသတ်ရဲနေမှတော့ ဒီလောက်တော့အပျော့ပဲနေမှာပေါ့။ တစ်ခုအံ့သြဖို့ကောင်းတာက လူ့သိက္ခာနှင့်တန်ဖိုးကို လုံးဝနားမလည် တန်ဖိုးမထားတဲ့တပ်မတော်ရဲ့လုပ်ရပ် ထောက်ခံချီးကြူးထောမနာပြုကြတဲ့ လူတွေရဲ့အသိညဏ်ရေချိန်ကိုပါပဲ။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတော်တွေသတ်ဖို့နှင့် အမိန့်ကို ဘယ်တပ်သားတစ်ယောက်တစ်လေကမှ မဖီဆန်ကြတာပဲ။ လူသားဆန်တဲ့လူသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလောက်ရှားပါးရသလားဆိုတာကိုပဲ အံ့သြမဆုံးဖြစ်မိပါတယ်။
Reply	ကိုနိုင်မြန်မာ January 17, 2013 - 10:09 pm	လေးစားပါတယ်တပ်မတော်လူကြီးများ ဘာတွေစဉ်စားတာတုန်း ၇ဲဘော်၇ဲဘက်စိတ်၇ှိ၇မယ်ဆိုတာဘယ်ေ၇ာက်သွားလဲဗျာ
Reply	Mr Kian January 19, 2013 - 7:05 pm	Thats why we call Burma/Bama Army…